Waa kuma ninka uu Trump u xushay agaasimaha sirdoonka 'ee lala wada yaabay'? - BBC News Somali
Waa kuma ninka uu Trump u xushay agaasimaha sirdoonka 'ee lala wada yaabay'?
20 Febraayo 2020
Richard Grenell, oo ah safiirka Mareykanka ee Jarmalka, waa nin xulafo aad u dhow la ah Trump
Madaxweyne Donald Trump ayaa Richard Grenell, oo hadda ah safiirka Jarmalka, u xushay inuu noqdo sii hayaha xilka agaasimaha laamaha sirdoonka ee Mareykanka.
Tallaabadan ayaa ka yaabisay dad badan, iyadoo la ogyahay in ninkan uusan wax khibrad ah u lahayn shaqadaas, horayna uu sameeyay howlo muran dhaliyay oo la xiriira siyaasadaha dhinaca midig u xagliya.
Hase yeeshee, Mr Grenell waa nin aad daacad ugu ah madaxweyne Trump, kana mid ah ragga ay sida weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha. Wuxuu ku caan baxay hadallada uu sida joogtada ah ugu difaaco madaxweynaha.
Dadka kasoo horjeestay go'aanka uu Trump kusoo xushay madaxa sirdoonka ayaa sheegay in Mr Grenell uusan xaqiiqooyin dhab ah soo gudbin doonin, maadaama uu yahay nin u janjeera dhinaca madaxweynaha, "howshiisana uusan si daacad ah u gudan doonin".
Marka uu la wareego xilka sii hayaha madaxa sirdoonka, Mr Grenell wuxuu maamuli doonaa hay'adda amniga Qaran ee Mareykanka, FBI-da, waliba CIA-da iyo hay'ado kale.
Sidoo kale wuxuu madaxweynaha kala talin doonaa dhinaca arrimaha sirdoonka.
Madaxweyne Trump ayaa magacaabista ninkan Arbacadii ku shaaciyay bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in Mr Grenell "uu shaqo wanaagsan qabtay inta uu danjiraha ahaa".
Trump oo ku sannifay madixii hore ee CIA-da
Laakiin warbaahinta Mareykanka ayaa tabineysa in qaar ka mid ah saraakiisha iyo xulafada Trump ay ka walaacsan yihiin in Mr Grenell jagadan loogu dhiibay sabab la xiriirta inuu daacad u yahay Mr Trump.
Mr Grenell wuxuu horay uga shaqeyn jiray warbaahinta Fox News, wuxuuna sidoo kale soo noqday afhayeenka Mareykanka ee Qaramada Midoobay, intii uu jiray maamulkii madaxweyne George W Bush.
Waxaa la rumeysan yahay inuu yahay ninkii ugu horreeyay ee caddeystay inuu yahay ragga xiriirka jinsiyadeed la sameeya ragga kale, oo xubin ka noqday golaha Wasiirrada ee Mr Trump.
Mr Grenell wuxuu baddali doonaa sii haya xilka agaasimaha laamaha sirdoonka Joseph Maguire, kaasoo howlgab noqday, kuna khasban inuu xilka ka dago 12-ka bisha March, sida uu qabo sharciga federaalka Mareykanka.
Markii uu agaasimihii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay, Dan Coats, shaqada ka tagay bishii July ee sanadkii hore, wuxuu madaxweynaha isku dayay inuu jagadaas u dhiibo nin kale oo ka mid ah ragga daacadda u ah, kaasoo ah xildhibaanka xisbiga Jamhuuriga ee ka tirsan aqalka wakiillada, John Ratcliffe.
Hase yeeshee wuxuu Trump ugu dambeyn go'aansaday inuusan xilkaas u magacaabin Mr Ratcliffe, maadaama uusan wax khibrad ah u lahayn.
Way iska caddeyd inaan laga ansixin doonin aqalka sare ee Senate-ka, kaasoo go'aanka ugu dambeeya ka gaara saraakiisha loo magacaabo xilalka sar sare.
Ma cadda in Mr Trump uu doonayo in Mr Grenell uu xilkan si rasmi ah u qabto iyo inkale.
Qaar ka mid ah saraakiisha ku sugan Washington ayaan la dhacsaneyn tallaabadan.
"Tani waa shaqo u baahan hoggaamin, maamul, karti iyo sir ilaalin", waxaa sidaas yiri John Sipher, oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa hay'adda CIA-da, xilli uu la hadlayay wargeyska New York Times.
"Isagu ma laha nooca khibrad ee aan rajeyneynay in qof leh loo magacaabo jagadaas muhiimka ah", ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Yaa kale oo horay usoo qabtay xilkan?
Fikradda ku saabsan in la abuuro jagada agaasimaha sirdoonka Mareykanka waxay soo jiitameysay ilaa sanadihii 1950-meeyadii, laakiin lama aasaasin ilaa laga gaaray markii uu dhacay weerarkii 9/11.
John Negroponte ayaa ahaa agaasimihii ugu horreeyay noqday sanadkii 2005. Wuxuu ahaa nin arrimaha dibadda aad uga soo shaqeeyay, howlihii uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa inuu noqday danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay iyo dalka Ciraaq. Wuxuu sidoo kale ahaan jiray ku xigeenka la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka, Ronald Reagan.
Mike McConnell wuxuu ahaa nin milatariga ka tirsan oo khibrad badan u lahaa arrimaha sirdoonka. Wuxuu horay u ahaa agaasimaha Hay'adda Amniga Qaran ee Mareykanka, ka hor inta aan xilka madaxa sirdoonka loo magacaabin sanadkii 2007-dii.
Dennis Blair wuxuu ahaa sarkaal milatari oo howlgab ah, kaasoo horay u soo noqday taliyihii ciidamada Mareykanka ee Pacific iyo waliba mid ka mid ah agaasimeyaasha shaqaalaha ee waaxda gaashaandhigga. Wuxuu sidoo kale soo noqday agaasime ka tirsan laanta sirdoonka Milatariga, intii ay jirtay dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Bill Clinton.
James Clapper wuxuu ahaa janaraal ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka, sidoo kalena wuxuu ahaa agaasimaha sirdoonka ee hay'adda difaaca. Waxaa kale oo uu kasoo shaqeeyay sirdoonka milatariga wixii ka dambeeyay weerarkii 9/11, abaalmarin qaddarin ah ayuuna helay markii uu xilka ka dagay madaxweyne Barack Obama.
Dan Coats, oo xilkan ka dagay sanadkii 2019-kii, wuxuu ahaa rug-caddaa ka tirsanaa ciidanka milatariga, horayna wuxuu usoo noqday Senator-ka gobolka Indiana iyo safiirka Jarmalka.
Mr Trump wuxuu ciil badan u qabay laanta sirdoonka tan iyo markii uu madaxweynaha noqday, isagoo su'aal galiyay wararka sheegayay in Ruushka ay faragalin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016-kii.
Sanadkii lasoo dhaafay, Mr Trump wuxuu madaxdii sirdoonka ee maamulkiisa u sheegay "inay dhammaantood iskuul ku laabtaan", isagoo ku cambaareynayay "inay aad ugu jilicsanaadeen" arrimaha Iiraan.
TOOS Vietnam oo farriin u soo dirtay Farmaajo iyo Rooble
Janaraalka "fashiliyay" weerarkii nukliyeerka ee Trump uu ku qaadi rabay Shiinaha